၇ရက်သားသမီးတစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း – 15.3.2018 – 21.3.2018 – PoPinVdo
သတင်းဦး၊သတင်းထူးများ နှင့်​ ဗဟုသုတ
၇ရက်သားသမီးတစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း – 15.3.2018 – 21.3.2018
March 14, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)​ဗေဒင်​No Comment on ၇ရက်သားသမီးတစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း – 15.3.2018 – 21.3.2018
ဒီကာလထဲ အလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေတာမျိုးတွေ ကြုံခဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ သည်းခံပြီးတော့ကျော်ဖြတ်လိုက်ပါ။ တာဝန်မယူတတ်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းရတတ်ပါတယ်။ ဖခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထူးပဲ ဂရုစိုက်သင့်လှပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ စာချုပ်စာတန်းများလက်မှတ်ထိုးစရာကိစ္စများ ကြုံလာပါကသေချာစီစစ်ပြီးမှထိုးသင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ရောဂါဗေဒအနေနဲ့သိပ်ပြီးမခံစားရပေမဲ့ အလုပ်ပင်ပန်းလို့ ပန်းဖျားဖျားတာမျိုးတော့ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ လူငယ်များ ဖခင်နဲ့အခြေအတင်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ မိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုး အိမ်ထောင်ဘက်ပုံသွင်းဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ အချစ်ရေးကံကောင်းပါတယ်။ မိဘတွေကိုတော့ လက်ထပ်ဖို့ဖွင့် မပြောသင့်သေးပါဘူး။ ပညာရေးအထူးကောင်းမှာပါ။စိုးရိမ်စိတ်နဲ့တော့
အကျိုးပေးဂဏန်း 2/5/9…အထူးဟော ပူပန်ရတတ်ပါတယ်။…ယတြာ ဖိနပ်ပြတ်တွေ အိမ်မှာရှိရင်စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။
ဒီကာလထဲ အလုပျထဲမှာအဆငျမပွတောမြိုးတှေ ကွုံခဲ့ရမယျဆိုရငျတော့ သညျးခံပွီးတော့ကြျောဖွတျလိုကျပါ။ တာဝနျမယူတတျတဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျ တှကွေောငျ့ စိတျပငျပနျးရတတျပါတယျ။ ဖခငျရဲ့ကနျြးမာရေးကိုအထူးပဲ ဂရုစိုကျသငျ့လှပါတယျ။ အရေးကွီးတဲ့ စာခြုပျစာတနျးမြားလကျမှတျထိုးစရာကိစ်စမြား ကွုံလာပါကသခြောစီစဈပွီးမှထိုးသငျ့ပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ရောဂါဗဒေအနနေဲ့သိပျပွီးမခံစားရပမေဲ့ အလုပျပငျပနျးလို့ ပနျးဖြားဖြားတာမြိုးတော့ ကွုံရနိုငျပါတယျ။ လူငယျမြား ဖခငျနဲ့အခွအေတငျဖွဈရတတျပါတယျ။ အိမျထောငျရေးမှာတော့ မိမိလိုခငျြတဲ့ပုံစံမြိုး အိမျထောငျဘကျပုံသှငျးဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့။ အခဈြရေးကံကောငျးပါတယျ။ မိဘတှကေိုတော့ လကျထပျဖို့ဖှငျ့ မပွောသငျ့သေးပါဘူး။ ပညာရေးအထူးကောငျးမှာပါ။စိုးရိမျစိတျနဲ့တော့
အကြိုးပေးဂဏနျး 2/5/9…အထူးဟော ပူပနျရတတျပါတယျ။…ယတွာ ဖိနပျပွတျတှေ အိမျမှာရှိရငျစှနျ့ပဈလိုကျပါ။
အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေ တိုးပွားမဲ့ကာလပါပဲ။ လှချင်ပချင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့် အလှကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်မိနေတတ်ပါတယ်။ လူချစ်လူခင်များသလို ရည်စားမရှိသေးသူများချစ်ရေးဆိုခြင်းခံရတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူရှိသူများကတော့ ဝေးနေရတာမျိုးကြုံရတတ်တာကြောင့်ဖုန်းနဲ့ပဲ အလွမ်းဖြေရမှာပါ။ စပ်တူအလုပ်တွေအထူးအကျိုးပေးတယ်။ online စီးပွားရေးများအထူးတိုးတတ်ပါလိမ့်မယ်။ ငွေကံအထူးကောင်းတတ်ပါတယ်။ ခရီးသွားရင်းရောက်တဲ့မြို့မှာထီထိုးစေချင်ပါတယ်။ ကံကောင်းနေချိန်ဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ထဲမျှော်လင့်ထားတာလေးတွေပြည့်လာတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်လဲ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ မတည့်တာတွေတော့မစား
ပါနဲ့။ မင်္ဂလာကိစ္စ အလှူကိစ္စတွေဒီကာလမှာကြုံရတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကံကတော့ ဒီကာလမှာအထူးကောင်းပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်ကလဲ သင်ယူလွယ်တတ်မြောက်လွယ်နေပါတယ်
အကျိုးပေးဂဏန်း 6/9/2…အထူးဟော ကံမြင့်နေချိန်ပါပဲ။…ယတြာ သပြေပန်း လက်တစ်ဆုပ်ခန့် မွေးနံထောင့်မှာလှူဒါန်းပေးလိုက်ပါ။
အပေါငျးအသငျးမိတျဆှတှေေ တိုးပှားမဲ့ကာလပါပဲ။ လှခငျြပခငျြစိတျတှဖွေဈပျေါနတောကွောငျ့ အလှကုနျပစ်စညျးတှဝေယျမိနတေတျပါတယျ။ လူခဈြလူခငျမြားသလို ရညျစားမရှိသေးသူမြားခဈြရေးဆိုခွငျးခံရတတျပါတယျ။ ခဈြသူရှိသူမြားကတော့ ဝေးနရေတာမြိုးကွုံရတတျတာကွောငျ့ဖုနျးနဲ့ပဲ အလှမျးဖွရေမှာပါ။ စပျတူအလုပျတှအေထူးအကြိုးပေးတယျ။ online စီးပှားရေးမြားအထူးတိုးတတျပါလိမျ့မယျ။ ငှကေံအထူးကောငျးတတျပါတယျ။ ခရီးသှားရငျးရောကျတဲ့မွို့မှာထီထိုးစခေငျြပါတယျ။ ကံကောငျးနခြေိနျဖွဈတာကွောငျ့ စိတျထဲမြှျောလငျ့ထားတာလေးတှပွေညျ့လာတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးအတှကျလဲ စိုးရိမျစရာမရှိပါဘူး။ မတညျ့တာတှတေော့မစား
ပါနဲ့။ မင်ျဂလာကိစ်စ အလှူကိစ်စတှဒေီကာလမှာကွုံရတှရေ့တတျပါတယျ။ ပညာရေးကံကတော့ ဒီကာလမှာအထူးကောငျးပါတယျ။ မိမိကိုယျတိုငျကလဲ သငျယူလှယျတတျမွောကျလှယျနပေါတယျ
အကြိုးပေးဂဏနျး 6/9/2…အထူးဟော ကံမွငျ့နခြေိနျပါပဲ။…ယတွာ သပွပေနျး လကျတဈဆုပျခနျ့ မှေးနံထောငျ့မှာလှူဒါနျးပေးလိုကျပါ။
မိတ်ဆွေတွေရဲ့ အကြံပေးခြင်းကိုလက်ခံလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုတွေရပါလိမ့်မယ်။၀န်ထမ်းတွေနဲ့တက်ညီလက်ညီစပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုတွေရရှိမှာပါ။ စပ်တူအလုပ်များ ရှယ်ယာလုပ်ငန်းများလဲ အထူးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှာပါ။ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ security လုပ်ငန်း၊ဇိမ်ခံပစ္စည်များနှင့် ပရိဘောဂလုပ်ငန်းများလဲ အထူးကောင်းမှာပါ။ ကျန်းမာရေးလဲအညံ့အဆိုးကင်းဝေနေပါလိမ့်မယ်။ ကံအကောင်းဆုံးကတော့အချစ်ရေးပါ။ စန်းအလွန်ပွင့်နေပါလိမ့်မယ်။လူချစ်လူခင်အလွန်များမဲ့ ကာလပါပဲ။ ချစ်သူရဲ့ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးကံကြမ္မာကတော့ အထူးကောင်းပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်ကလဲ ပညာရေးအပေါ်စိတ်ဝင်
အကျိုးပေးဂဏန်း ၃/၆/၂…အထူးဟော စိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေကြုံရမည်။…ယတြာ နီးစပ်ရာစေတီမှာ ညလုံးပေါက်လျှပ်စစ်မီးပူဇော်ပါ။
မိတျဆှတှေရေဲ့ အကွံပေးခွငျးကိုလကျခံလုပျကိုငျခွငျးဖွငျ့အောငျမွငျမှုတှရေပါလိမျ့မယျ။ဝနျထမျးတှနေဲ့တကျညီလကျညီစပေါငျးလုပျကိုငျခွငျးဖွငျ့ အောငျမွငျမှုတှရေရှိမှာပါ။ စပျတူအလုပျမြား ရှယျယာလုပျငနျးမြားလဲ အထူးအကြိုးဖွဈထှနျးမှာပါ။ ဘဏျလုပျငနျး၊ security လုပျငနျး၊ဇိမျခံပစ်စညျမြားနှငျ့ ပရိဘောဂလုပျငနျးမြားလဲ အထူးကောငျးမှာပါ။ ကနျြးမာရေးလဲအညံ့အဆိုးကငျးဝနေပေါလိမျ့မယျ။ ကံအကောငျးဆုံးကတော့အခဈြရေးပါ။ စနျးအလှနျပှငျ့နပေါလိမျ့မယျ။လူခဈြလူခငျအလှနျမြားမဲ့ ကာလပါပဲ။ ခဈြသူရဲ့ မွတျနိုးတနျဖိုးထားခွငျးကိုခံရပါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးကံကွမ်မာကတော့ အထူးကောငျးပါတယျ။ မိမိကိုယျတိုငျကလဲ ပညာရေးအပျေါစိတျဝငျ
အကြိုးပေးဂဏနျး ၃/၆/၂…အထူးဟော စိတျခမျြးမွစေ့ရာတှကွေုံရမညျ။…ယတွာ နီးစပျရာစတေီမှာ ညလုံးပေါကျလြှပျစဈမီးပူဇျောပါ။
ဒီကာလအတွင်း သတိထားရမှာကတော့ အိမ်ထောင်သည်တွေပါပဲ။ အိမ်ထောင်ရေးကံကြမ္မာ အ
ထူးအားနည်းနေချိန်ပါပဲ။ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ပြဿ နာတတ်လွယ်တဲ့ကာလပါပဲ။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး
ပိတ်ဆို့နေတဲ့ ကံတွေလဲ ပွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ကံအားနေချိန်ဖြစ်တာကြောင့် အဘက်ဘက်က သတိထားဖို့တော့လိုပါတယ်။ တစ်အိမ်ထဲနေတဲ့ မောင်နှမတွေမတည့်တာမျိုးလဲ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ အဆိုးထဲကအကောင်းလို့ပြောရမှာပါ။ ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူများ ဒီကာလမှာ အနာနဲ့ဆေးတွေ့ပြီး ချမ်းသာပျောက်ကင်းပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးကံလဲ ကောင်းနေပါတယ်။ ချစ်သူကို အလွန်အကျွံစနောက်ခြင်းမျိုးတော့ရှောင်ပါ။ ပညာရေးကံအားနည်းနေတယ်လို့ သုံးသပ်ရပါတယ်။ အထူးကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၁/၃…အထူးဟော ကံညံ့နေချိန်ပါပဲ…ယတြာ ဘုရားရှင်အား ယပ်တော်သွင်းပါ။
ဒီကာလအတှငျး သတိထားရမှာကတော့ အိမျထောငျသညျတှပေါပဲ။ အိမျထောငျရေးကံကွမ်မာ အ
ထူးအားနညျးနခြေိနျပါပဲ။ အိမျထောငျဖကျနဲ့ပွဿ နာတတျလှယျတဲ့ကာလပါပဲ။ အလုပျနဲ့ပကျသကျပွီး
ပိတျဆို့နတေဲ့ ကံတှလေဲ ပှငျ့ပါလိမျ့မယျ။ ကံအားနခြေိနျဖွဈတာကွောငျ့ အဘကျဘကျက သတိထားဖို့တော့လိုပါတယျ။ တဈအိမျထဲနတေဲ့ မောငျနှမတှမေတညျ့တာမြိုးလဲ ရှိပါလိမျ့မယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ အဆိုးထဲကအကောငျးလို့ပွောရမှာပါ။ ရောဂါဝဒေနာခံစားနရေသူမြား ဒီကာလမှာ အနာနဲ့ဆေးတှပွေီ့း ခမျြးသာပြောကျကငျးပါလိမျ့မယျ။ အခဈြရေးကံလဲ ကောငျးနပေါတယျ။ ခဈြသူကို အလှနျအကြှံစနောကျခွငျးမြိုးတော့ရှောငျပါ။ ပညာရေးကံအားနညျးနတေယျလို့ သုံးသပျရပါတယျ။ အထူးကွိုးစားစခေငျြပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၆/၁/၃…အထူးဟော ကံညံ့နခြေိနျပါပဲ…ယတွာ ဘုရားရှငျအား ယပျတျောသှငျးပါ။
သိပ်ထွေထွေထူးထူး စဉ်းစားစရာမလိုတဲ့ကာလပါ။ တစ်ကြောင်းထဲသော စိတ်နဲ့ ပဲ အရာရာတိုင်းကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါ။ သူများအကြံပေးတာမျိုးကို နားမယောင်မိပါစေနဲ့ ။မိမိစိတ်ကူးအတွေးအကြံကသာ အဓိကပါပဲ။ အပြောင်းအလဲ ဘာမှမလုပ်စေချင်ပါ။ အပြောင်းအလဲလုပ်ခြင်းက သေချင်တဲ့ကျား
တောပြောင်းဆိုတာမျိုး ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် သိပ်စိုးရိမ်ဖို့တော့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဗိုက်အောက်ဗိုက်နာဖြစ်ရင်တော့ ဆေးမြီးတိုနဲ့ မကုလိုက်ပါနဲ့။ ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ကင်းတာတွေ လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ အချုပ်ကျခြင်း အမှုရင်ဆိုင်ရခြင်းမျိုး ကြုံရတတ်လို့ပါပဲ။ အချစ်ရေးကံကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ အချစ်နယ်ကျွံတာမျိုးတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ပညာရေးအထူးကောင်းပါတယ်။ ပညာရပ်အသစ်များ စတင်သင်ယူခြင်းက ထိုပညာရပ်ကို ဆုံးခန်းတိုင်တတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၃/၉ …. အထူးဟော ကံသင့်ပါတယ်။ ….ယတြာ ငါးမုန့်ကြော်လေးများဝယ်ပြီး ရပ်ကွက်ထဲက ကလေးတွေကို ဝေကျွေးလိုက်ပါ။
သိပျထှထှေထေူးထူး စဉျးစားစရာမလိုတဲ့ကာလပါ။ တဈကွောငျးထဲသော စိတျနဲ့ ပဲ အရာရာတိုငျးကိုလုပျကိုငျဆောငျရှကျပါ။ သူမြားအကွံပေးတာမြိုးကို နားမယောငျမိပါစနေဲ့ ။မိမိစိတျကူးအတှေးအကွံကသာ အဓိကပါပဲ။ အပွောငျးအလဲ ဘာမှမလုပျစခေငျြပါ။ အပွောငျးအလဲလုပျခွငျးက သခေငျြတဲ့ကြား
တောပွောငျးဆိုတာမြိုး ဖွဈရတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးအတှကျ သိပျစိုးရိမျဖို့တော့ မလိုပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဗိုကျအောကျဗိုကျနာဖွဈရငျတော့ ဆေးမွီးတိုနဲ့ မကုလိုကျပါနဲ့။ ဥပဒနေဲ့ မလှတျကငျးတာတှေ လုံးဝမလုပျပါနဲ့။ အခြုပျကခြွငျး အမှုရငျဆိုငျရခွငျးမြိုး ကွုံရတတျလို့ပါပဲ။ အခဈြရေးကံကောငျးနတေတျပါတယျ။ အခဈြနယျကြှံတာမြိုးတော့ မဖွဈပါစနေဲ့။ ပညာရေးအထူးကောငျးပါတယျ။ ပညာရပျအသဈမြား စတငျသငျယူခွငျးက ထိုပညာရပျကို ဆုံးခနျးတိုငျတတျမွောကျပါလိမျ့မယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၅/၃/၉ …. အထူးဟော ကံသငျ့ပါတယျ။ ….ယတွာ ငါးမုနျ့ကွျောလေးမြားဝယျပွီး ရပျကှကျထဲက ကလေးတှကေို ဝကြှေေးလိုကျပါ။
ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်စရာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းကိစ္စများအားလုံး ဒီကာလမှာ လုပ်ကိုင်ဖို့သင့်ပါပြီ။ ရပ်ဝေးနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ရသော စီးပွားရေးများအထူးအကျိုးပေးနေချိန်ပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ကားလုပ်ငန်း ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း လက်ကားစီးပွားရေးများ အထူးပဲ အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ အနည်းငယ်ညံ့ပါတယ်။ ခြူ ခြာလွယ်တဲ့ ကာလပါပဲ။ရက်လွန်နေသော စားသောက်ကုန်များ မစားမိအောင် ဆင်ခြင်ပါ။ အချစ်ရေးကံက ချစ်လွန်းအားကြီးမှုကလဲ ပြဿ နာကို ဖြစ်စေတာပါပဲ။ သဝန်တိုပြီး အထင်လွဲ ပြဿ နာရှာတဲ့ ချစ်သူကို နားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ မလွယ်ကူတဲ့ကာလပါပဲ။ ပညာရေးအတွက် ရည်မှန်းချက်သစ်များ ပန်းတိုင်သစ်များ ချမှတ်လို့ အထူးကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၃/၂ …. အထူးဟော တိုးတတ်အောင်မြင်မဲ့ ကာလပါ ….ယတြာ ရေသန့်ဘူး ရဟန်းတစ်ပါးကိုလှူလိုက်ပါ။
ရှတေို့းဆောငျရှကျစရာရှိတဲ့ လုပျငနျးကိစ်စမြားအားလုံး ဒီကာလမှာ လုပျကိုငျဖို့သငျ့ပါပွီ။ ရပျဝေးနဲ့ခြိတျဆကျလုပျကိုငျရသော စီးပှားရေးမြားအထူးအကြိုးပေးနခြေိနျပါ။ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား အဆငျပွခြေောမှအေ့ောငျမွငျပါလိမျ့မယျ။ ကားလုပျငနျး ကုနျသှယျရေးလုပျငနျး လကျကားစီးပှားရေးမြား အထူးပဲ အောငျမွငျတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ အနညျးငယျညံ့ပါတယျ။ ခွူ ခွာလှယျတဲ့ ကာလပါပဲ။ရကျလှနျနသေော စားသောကျကုနျမြား မစားမိအောငျ ဆငျခွငျပါ။ အခဈြရေးကံက ခဈြလှနျးအားကွီးမှုကလဲ ပွဿ နာကို ဖွဈစတောပါပဲ။ သဝနျတိုပွီး အထငျလှဲ ပွဿ နာရှာတဲ့ ခဈြသူကို နားလညျအောငျရှငျးပွဖို့ မလှယျကူတဲ့ကာလပါပဲ။ ပညာရေးအတှကျ ရညျမှနျးခကျြသဈမြား ပနျးတိုငျသဈမြား ခမြှတျလို့ အထူးကောငျးနပေါလိမျ့မယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၆/၃/၂ …. အထူးဟော တိုးတတျအောငျမွငျမဲ့ ကာလပါ ….ယတွာ ရသေနျ့ဘူး ရဟနျးတဈပါးကိုလှူလိုကျပါ။
အလုပ်နဲ့ပက်သက်သောကိစ္စတွေကြောင့် ရပ်ဝေးသွားရဖို့ အကြောင်းဖန်လာတတ်ပါတယ်။ ရစရာရှိတဲ့ ကြွေးမြီးတွေရှိရင် ပြန်တောင်းဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်။ အမှုဟောင်း ပြဿ နာဟောင်း ရန်ကြွေးရန်စဟောင်းများရှိခဲ့သူဆို ဒီကာလပြန်လည်ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်ကို ပြဿ နာမရှာပါနဲ့။ အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ငွေဝင်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ဖို့လဲ အကြောင်းဖန်လာတတ်ပါတယ်။ လောကီထက် လောကုတ္တရာအကျိုးပေးမဲ့ကာလပါပဲ။ မိမိကိုယ်တိုင် အချစ်ရေးကိုစိတ်မပါသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ သိပ်စိတ်ပူဖို့မလိုပါဘူး။ သတိထားရမှာက ဒူးနာ ခါးနာဆိုတာမျိုးပါပဲ။ ပညာရေးမှာ လောကီပညာထက် လောကုတ္တရာဉာဏ်ပညာဘက်ကို ပိုကောင်းတဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၇/၅/၁ …. အထူးဟော အလုပ်များနေရလိမ့်မယ်။ ….ယတြာ ဘုရားရှင်အား ထိုးမုန့်ကပ်လှူပေးပါ။
အလုပျနဲ့ပကျသကျသောကိစ်စတှကွေောငျ့ ရပျဝေးသှားရဖို့ အကွောငျးဖနျလာတတျပါတယျ။ ရစရာရှိတဲ့ ကွှေးမွီးတှရှေိရငျ ပွနျတောငျးဖို့ခကျပါလိမျ့မယျ။ အမှုဟောငျး ပွဿ နာဟောငျး ရနျကွှေးရနျစဟောငျးမြားရှိခဲ့သူဆို ဒီကာလပွနျလညျဖွရှေငျးရတတျပါတယျ။ အိမျထောငျဘကျကို ပွဿ နာမရှာပါနဲ့။ အိမျပျေါကဆငျးသှားတတျပါတယျ။ ငှဝေငျလာဖို့ရှိနပေါတယျ။ အဓိဋ်ဌာနျဝငျဖို့လဲ အကွောငျးဖနျလာတတျပါတယျ။ လောကီထကျ လောကုတ်တရာအကြိုးပေးမဲ့ကာလပါပဲ။ မိမိကိုယျတိုငျ အခဈြရေးကိုစိတျမပါသလိုဖွဈနတေတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ သိပျစိတျပူဖို့မလိုပါဘူး။ သတိထားရမှာက ဒူးနာ ခါးနာဆိုတာမြိုးပါပဲ။ ပညာရေးမှာ လောကီပညာထကျ လောကုတ်တရာဉာဏျပညာဘကျကို ပိုကောငျးတဲ့သဘောတှရေ့ပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၇/၅/၁ …. အထူးဟော အလုပျမြားနရေလိမျ့မယျ။ ….ယတွာ ဘုရားရှငျအား ထိုးမုနျ့ကပျလှူပေးပါ။
ငြိမ်းအေးလူ (ဗေဒင်သုတေသီ) ….Viber Only( 09775555695)
တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း (အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့အထိ)
ယခုနှစ် တနင်္လာ ဗုဒ္ဓဟူး အင်္ဂါ စနေ သားသမီး များ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲကုန်အံ့
ဘယ်လိုသေမှာလဲ ဆိုတာကို သိချင်ရင် ဒီနည်းလေးနဲ့တွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
View all posts by popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​) →
ဘုရားရှင်ဆံတော် ဘာကြောင့်အရှည်ထားရတာလဲ ? ? ?
သိန်း ၂ သောင်းတန်ထီပေါက်ခဲ့ပေမဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကြောင့် ဆုကြေးနဲ့လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေး
ကျွန်မခင်ပွန်းမဟုတ်တဲ့ တခြားယောက်ျားကို တမ်းတမိတာ ကျွန်မအပြစ်လား “ !!!
လေယာဉ်သံ ကြားတိုင်း ဒီမိသားစု တွေးသတိတရ ကြေကွဲနေတော့မှာ
ယိုင်နဲ့လာတဲ့ Justin Bieber နဲ့ Hailey ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး
၉ တန်းကျောင်းသူလေးအား အခန်းမတူ ၉ ကျောင်းသားလေးဦးမှ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်မှု
Categories Select Category ၀တ္ထု (11) celebrity (389) Dice (1) IT နည်းပညာ ဗဟုသုတ (36) Life (26) Uncategorized (41) ကျန်းမာ​ရေး (483) ချက်နည်းပြုတ်နည်း (3) ဂျင့း (3) ဂျင်း (13) ဆယ်​လီ (647) ထီပေါက်စဉ် (11) ထူးဆန်းထွေလာ (98) နည်းလမ်းလေးများ (26) ပညာရေး (14) ကြားရသိရသမျှ (2,391) ဗဟုသုတ (1,397) ဘ၀ခွန်အားဖြည့် (8) ဘာသာရေး (22) မိုး​လေဝသ သတင်း (73) မှုခင်းသတင်း (152) ပြည်​တွင်းသတင်း (949) ဖြစ်ရပ်မှန် (137) မြန်မာအိုင်ဒေါ (82) လူမှုဘ၀ (117) သတင်း (157) သတင်းထူး (64) သရဲ၊တ​စ္ဆေ (123) သိမှတ်စရာ (111) ဟာသ (182) အချစ်​+ရသ (98) အစားအသောက် (10) အလှအပ​ရေးရာ (15) အားကစား (243) အနုပညာသတင်း (607) ဆောင်းပါး (51) နောက်ဆုံးရသတင်းများ (68) ဖျော်ပြေရေး (2) ​ဗေဒင်​ (94) နိုင်​ငံတကာသတင်း (597)
​လေးစားစွာ credit ​ပေးပါသည်​
popinvdo.xyz မှာ တင်ဆက်ထားသော content များသည် ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါ.. အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပြန့်ကျဲနေသော စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကို လူအများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် တင်ဆက်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်. . .
သို့ဖြစ်သောကြောင့် ကူးယူဖော်ပြခံရသော မီဒီယာများနှင့် စာရေးသူများကို လေးစားစွာဖြင့် credit ပေးပါသည် . .
မီဒီယာများ အနေနဲ့ မိမိတို့ content များကို popinvdo.xyz မှာ ကူးယူဖော်ပြတာကို ကန့် ကွက်လိုပါက ppp@popinvdo.xyz ကို စာရေးသားပေးပို့ကန့် ကွက်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ. . . . . . .